Zvirongwa zveiyo iPhone 14 Pro zvinoratidza kuti yakakora | Nhau dze iPhone
Izvo zvinonzi zvirongwa zvakangoburitswa nezviyero zvekunze zve iPhone 14 Pro. Kana zvirongwa izvi zviri zvechokwadi, isu takatarisana ne iPhone yakati gobvu kupfuura yakatangira, uye ine yakawedzera kutaurwa protrusion yemakamera.
Izvi zvinoreva kuti kana iyo inotevera iPhone 14 Pro isina kurongedzerwa nekesi, ichagara zvakatowedzera kubva patafura painozorora pairi yakatarisana kumusoro. Tichaona….
Zvichangoburitswa nhasi. Twitter chii chingave hurongwa hwakadzama hweiyo iPhone 14 Pro uye iPhone 14 Pro Max, zvichiratidza kuti maPhones anotevera ekupedzisira-ekupedzisira anogona kuratidza akatanhamara kamera uye dhizaini yakazara. mukobvu.
Zvinoenderana nemapurani aya, iyo iPhone 14 Pro Max ichayera 77,58mm yakafara, yakatetepa zvishoma pane iyo iPhone 13 Pro Max iyo inoyera 78,1mm. Pamusoro pezvo, iyo iPhone 14 Pro Max ichave yakada kufanana neiyo iPhone 13 Pro Max pakukwirira, kuyera 160,7mm kana ichienzaniswa ne160,8mm.
Mukukora, iyo iPhone 14 Pro Max ichayera 7,85mm, yakakora zvishoma pane yazvino yakakwira-yekupedzisira iPhone, inoyera 7,65mm chete. Iine iPhone 13 Pro uye iPhone 13 Pro Max, Apple yakawedzera zvakanyanya saizi yekamera dock kumashure kana ichienzaniswa neiyo iPhone 12 Pro. Muna 2022, Apple iri kutsvaga kudzokorora maitiro akafanana. kuwedzera kuwedzera kukora kwekubuda kwemakamera.
Aya ndiwo maroto aJon Prosser kuti ichave iyo iPhone 14 Pro Max
Iyo yakasarudzika yemakamera ichave yakakura
Iyo kamera dock pa iPhone 13 Pro Max inongoyera 3,60mm pakureba, zvichibva pamirayiridzo yakagadzirwa neApple yevagadziri vezvekuwedzera kuti vafunge. Zvichienderana neiyo iPhone 14 Pro Max schematics yakagovaniswa nhasi, iyo kamera bump pa2022 yepamusoro-yekupedzisira iPhone ichave ine. 4,17 mamirimita gobvu. Iyo kamera dock pachayo kuseri kwe iPhone ichawedzerawo muhukuru neinoda 5% muchikamu chimwe nechimwe, kubva pahupamhi huripo hwe35,01mm kusvika 36,73mm uye hurefu hwe36,24mm kusvika 38,21. .XNUMXmm
Schematics yeidiki iPhone 14 Pro yakaburitswawo nhasi. Zvichienderana nezvirongwa izvi, iyo iPhone 14 Pro yakada kufanana neiyo iPhone 13 Pro muhupamhi ingori 71,45mm inopesana ne71,5mm kune yazvino. Iyo iPhone 14 Pro pakukwirira icharamba isina kuchinjika kana ichienzaniswa neiyo iPhone 13 Pro, iyo inoyera 147,46mm vs. 147,5mm Kufanana neiyo iPhone 14 Pro Max, iyo iPhone 14 Pro icharatidzawo a gobvu kamera kuratidza, ichipinda pa4,17mm ichienzaniswa ne3,60mm pane yazvino iPhone 13 Pro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 14 » iPhone 14 Pro blueprints inoratidza kuti yakakora
Chizvarwa chechitatu che iPhone SE chinosvika nebhatiri hombe uye modem nyowani